बलिउडमा टिक्न यी अभिनेत्रीहरुले यस्तो हर्कतसम्म गरे, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
बलिउडमा टिक्न यी अभिनेत्रीहरुले यस्तो हर्कतसम्म गरे
एजेन्सी । भारतीय चलचित्र क्षेत्र विश्वमा निकै अगाडि बढिसकेको छ । जसले कयौँ पटक हलिउड चलचित्र क्षेत्रलाई पनि जितिसकेको छ । विश्वमै अगाडि बढ्न र नम्बर ‘वान’ हुनका लागि अभिनेत्रीहरुले धेरैपटक ‘बोल्डनेस’ को हद पार गर्नुपरेको थुप्रै उदाहरण भेटिन्छ । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार कतिपय चलचित्रमा अभिनेत्री तथा अभिनेताले ‘रियल सेक्स’ गरेका छन् । ती चलचित्रहरु हलिउडका भएको भएपनि बलिउडमा पनि यस्ता हर्कतहरु नहुने भने होइनन् । केही यस्ता चलचित्र बलिउडमा पनि बनेका छन् जसमा अभिनेत्रीहरुले पर्दामा आफ्नो सम्पूर्ण कपडा फुकालेर नाङ्गिएका थिए ।
सिमी ग्रेवालः चलचित्र ‘मेरा नाम जोकर’ मा ग्रेवालले पूरै नांगो सीन दिएकी छिन् । उनलाई बलिउडमा ‘बोल्ड सीन’ को शुरुवात गर्ने अभिनेत्रीको रुपमा समेत लिइन्छ ।
सनी लियोनीः ‘पोर्न फिल्म स्टार’ बाट बलिउड प्रबेश गरेकी लियोनीे धेरै पटक विभिन्न चलचित्रमा नांगिएकी छिन् । हालै उनी ‘मस्तीजादे’ र ‘रागनी–२’ मा पूरै ‘न्यूड’ देखिएकी छिन् ।
शार्लिन चोपडाः उत्ताउला भनाईका कारण बारम्बार चर्चामा आइरहने चोपडाले थुप्रै चलचित्रमा ‘न्यूड सीन’ दिएकी छिन् । चलचित्र ‘कामसुत्र’ मा उनका थुप्रै ‘न्यूड सीन’ देख्न सकिन्छ । उनी भन्ने गर्छिन्, ‘बलत्कार ‘सरप्राइज सेक्स’ जस्तै हो ।’
कल्कि कोचलिनः करियरको शुरुवातमा चलचित्र ‘देव डी’ गरेकी अभिनेत्री कल्किले ‘मार्गरीटा विद ए स्ट्रा‘’ मा ‘न्यूड सीन’ दिएकी छिन् । जसले निकै तहल्का मच्चाएको थियो ।
पूनम पाण्डेः बलिउड अभिनेत्री पूनम पाण्डे आफ्ना अनेक हर्कतका कारण चर्चामा आइराख्ने अभिनेत्रीमा पर्छिन् । उनले पनि चलचित्र ‘नशा’ मा न्यूड सीन दिएकी छिन् ।
पाओली दामः चलचित्र ‘हेट स्टोरी’ मा थुप्रै ‘न्यूड सीन’ देख्न सकिन्छ । जसमा दामको बोल्ड अवतार देख्न सकिन्छ ।
सीमा रहमानीःसीमा रहमानीले २००५ मा आएको चलचित्र ‘सिन्स’ मा एउटा पूरै ‘न्यूड सीन’ दिएकी थिइन् ।
अनु अग्रवालः अनुले चलचित्र ‘द क्लाउड’ मा थुप्रै ‘बोल्ड सीन’ दिएकी छिन् । उनले पर्दामा पनि पूरै ‘न्यूड सीन’ दिइसकेकी छिन् ।
दीपा साहीः चलचित्र ‘माया मेमसाहब’ मा अभिनेत्री दीपा र शाहरुख खानबीच बेड सीन देखाइएको थियो जसमा दीपा पूरै निर्वस्त्र थिइन् ।
राधिका आप्टेः बलिउड चलचित्र क्षेत्रमा आफ्नौ फरक पहिचान बनाएकी अभिनेत्री राधिका आप्टेले चलचित्र ‘पाच्र्ड’ मा केहि न्यूड सीन दिएकी छिन् ।
नन्दना सेनः अभिनेता रणदीप हूडासँग नन्दनालाई केही दृश्यमा निर्वस्त्र देखाइएको छ । उनले चलचित्र ‘रंग रसिया’ मा उनले ‘बोल्ड सीन’ पनि दिएकी छिन् ।